မဲခေါင်မြစ်ဘေးက သန်မ်တင်း ဂူ....
အင်ဒိုနီးရှား ကာလီမန်တန် ကျွန်း အမှတ်တရ....
နှစ်ဟောင်းကို နှုတ်ဆက်ရင်း နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွင်မူတွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by sait phay yar at 3:55 PM
ငယ်ငယ်က ခရစ်စမတ်ဆိုရင် မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်နေရာဘဲရောက်နေ ရောက်နေ အိမ်ကိုပြန်ကြပြီး ခရစ်မတ်ပွဲကျင်းပလေ့ရှိတယ်။ မုန့်တွေတူတူလုပ်စားကြတယ်။ အဲဒီအထဲမှာတော့ အဖေလုပ်တဲ့ကိတ်မုန့်ကိုစားရတာကိုက အပျော်ရွင်ဆုံးအချိန်လေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းခုချိန်မှာတော့ အဖေလုပ်တဲ့ကိတ်ကိုတော့ ဘယ်တော့မှမစားတော့တဲ့အပြင် မိသားစုလေးမှာ လူတွေမစုံတော့ ပျော်ရွင်မူတစ်ခြမ်းပဲ့လေးနဲ့ ကျန်ရှိတဲ့မိသားစုတွေ တတ်နိုင်သလောက်တော့ပြန်စုကြတယ်။ ကိုယ်ကတော့ အိမ်ရဲ့အဝေးမှာ အိမ်ကိုတော့လွမ်းနေသည်။ အိမ်ကိုပြန်ေ၇ာက်ရင်လည်း မစုံလင်တော့တဲ့မိသားစုလေးကိုကြည့်ပိုဝမ်းနည်းရပြန်သည်။
ဒီနှစ်ကတော့ အိမ်ကိုသိပ်လွမ်းနေမိသည်။ သီချင်းလေးတွေနားထောင်ရင် အိမ်အလွမ်းကိုဖြေရတော့မယ်။
Posted by sait phay yar at 7:28 PM
Posted by sait phay yar at 10:39 PM
ခြေလှမ်းတွေတက်ကြွနေတယ်။ မျက်လုံးတွေတောက်ပနေတယ်။ ပျော်လွန်းလို့လေ။
ဟုတ်တယ် ဒီနေ့တော့ ဘ၀အတွက် အိမ်မက်တွေကို အပြည့်အ၀ဖြည့်လိုက်နိုင်ပြီ။အောင်မြင်တဲ့အပြုံးနဲ့ ကျောင်းကြီးကိုကျောခိုင်းပြီး ပြန်လာခဲ့ပြီ။
ဘေးနားမှာ မောင်က ပြုံးလို့ကြည့်နေရင်း မ ရဲ့လက်ကိုခိုင်မာစွာဆုတ်ကိုင်ပေးထားတယ်။ အောင်စရင်းစာရွက်လေးကိုကိုင်လာရင်း ရေကန်ဘောင်လေးနားကိုအေ၇ာက် မောင့်လက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်း ကန်ဘောင်ဘေးနား တူတူထိုင်နေကြနေရာလေးမှာ စွင့်ကနဲထိုင်လိုက်တယ်။ ပျော်နေတဲ့ မ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး မောင် က မ ပါးလေးကိုလှစ်ကနဲနမ်းလိုက်ရင်း မောင့်ပါးလေးကိုလည်းလှစ်ကနဲနမ်းလိုက်မိတယ်။
မောင်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဒီနေ့ ပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့နိုင်ပြီ။ မောင်ကဘာစကားတစ်ခွန်းမှမပြော ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေသည်။ စကားနည်းတဲ့မောင် ကတော့ အမြဲအဲလိုဘဲလေ။ တော်တော်ကြာကြာလိပ်ကလေးတွေ ရေကူးနေတာကိုသေချာကြည့်ပြီး လာသွားဆို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ အိမ်ပြန်ဖို့ပြင်လ်ုက်ကြတယ်။
ကားပေါ်ကိုနှစ်ယောက်သားပျော်ပျော်ကြီး တက်လိုက်ကြပြီး ကားမောင်းနေတဲ့မောင့်ကို တစ်စောင်းအနေအထားမှ ကြည့်နေသည်။ မောင်က ကားကို ဂရုတစ်စိုက်မောင်းနေရင်း မ ဘက်ကိုလှည့်လှည့်ပြီးပြုံးပြနေသေးသည်။ ကားလေးက တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်နားရောက်လာပြီ။ အိမ်ရှေ့မှာလူတွေစုစု စုစု နှင့် တွေ့လိုက်ရသည်။ ဘာများဘာလိမ့်လို့ ကြည့်လိုက်ရင်း အမေ မောင်နှမတွေ တူတွေတူမတွေ စုံလို့ ခြံေ၇ှ့ကစောင့်နေကြတာ။ ကားလေးလည်းရပ်သွားကော မောင်က မ ပါးလေးကိုလှစ်ကနဲနမ်းလိုက်ရင်း ကားတံခါးလာဖွင့်ပေးတယ်။
အားလုံးဆူညံသွားကြတယ်။ အမေကလည်း ပြုံးလို့ကြည့်နေရင်း မ အနားကိုပြေးလာပြီး မွှေးမွှေးပေးတယ်။ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နှင့်ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ။ အိမ်ထဲကို မိသားစုလိုက်မိသားစုလိုက်ဝင်သွားကြပြီး ကလေးတွေကတော့ သူတို့ဝါသနာပါရာ ကစားပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်။ ရုပ်ဂှင်ကြည့်သူကကြည့် ကွန်ပြူတာဖွင့်သူက ဖွင့်နှင့် အလုပ်တွေရှုပ်နေကြတယ်။ နောက်ဖေးမှာကတော့ အမကြီးတို့က ချက်ဖို့ပြင်နေကြတယ်။ အကိုတို့က ဧည့်ခန်းမှာ မောင်နဲ့တူတူစကားတွေပြောနေကြတယ် အမေကတော့ မ လက်ကိုမဖြုတ်တမ်းကိုင်ထားရင်း သူ့ဘေးမှာလာထိုင်စေရင်းမေးသမျကိုဖြေစေတယ်။ ပျော်လိုက်တာမှ အလွန်နော် ပျော်စရာအိမ်ကလေး အေးချမ်းတဲ့အငွေ့အသက်လေးတွေကိုနွေးထွေးစွာခံစားရတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ အမေ က မောင့်ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်ရင်းပြုံးနေတတ်သည်။ ခဏနေတော့ယောက်မ က အမောပြေအအေးလာတိုက်တာ မမြင်တော့လက်နဲ့တိုက်လိုက်မိတယ်။ ရေတွေဖွားကနဲ ကျတာ မ တစ်ကိုယ်လုံးရွဲကုန်ရော
ဟုတ်ပါ့ ညက စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကိုတိုက်မိပြီး ရေတွေမှောက်ကြတာ အိပ်ယာတစ်ခုလုံး၇ွဲကုန်ပြီ။
ဟူး ပျော်စရာအိမ်မက်ကလေးကို ပြန်စဉ်းစားရင်း အိမ်ကိုလွမ်းလိုက်သည်။
ဟူး........... အိမ်မက်ကအပျော်ကိုဘေးမှာ အသာချလိုက်ရင်း နာရီကိုကြည့်လိုက်ရင်းမိုးစင်စင်လင်းနေပြီး အလုပ်အတွက်ထမဖြစ်တော့မည်လေ။
Posted by sait phay yar at 6:38 AM
သတိရတိုင်းသာစာတွေရေးနေမယ်ဆိုရင်စာအုတ်တွေလောက်မှာမဟုတ်ဘူးထင်။ ဟိုးအဝေးတစ်နေရာကိုမျှော်တွေးရင်း ငေးနေရုံကလွဲလို့ ပြန်မဆုံနိုင်တော့သူတစ်ယောက်အဖြစ် ရင်ထဲမှာလှစ်ကနဲ ခံစားနေလိုက်ရုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့။
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတောင် သံယောဇဉ်တွေဖြစ်တတ်သေးတာဘဲလေ လူတစ်ယောက်လုံးကြီးကိုချစ်ခဲ့တာ ခံစားချက်တွေရှိကြတာပေါ့။နောက်ပြီးစကားတွေပြောခဲ့ကြ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အားပေးခဲ့ကြ။ နားလည်းမူတွေဖလှယ်ကြနဲ့ အိမ်မက်တွေတူတူမက်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း အကြောင်းမလှလို့မပေါင်းနိုင်ခဲ့ ဆုံဆည်းခွင့်မရခဲ့ကြတာကိုသိရတော့လည်း ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ဘဲ နောက်ဆုတ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။ သူလည်းသင့်တော်မဲ့သူနဲ့လက်တွဲခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အရမ်းသတိရတဲ့အခါတွေမှာ စကားလေးတွေပြောချင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းမသင့်တော်တော့ဘူးလေ။
ကိုယ့်ဘက် ကဘဲနားလည်ပေးသင့်တယ်။ သူတပါးအိမ်ထောင်ရေးမှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့အရာတွေ ဘာမှ မလုပ်သင့်သလို လုံးဝကိုဘဲတိတ်တိတ်လေးနေပြီး အဆက်အသွယ်တွေဆက်လုပ်မနေ သင့်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ တခါတစ်လေတော့လည်း လွမ်းတာမှန်ပေမဲ့။
Posted by sait phay yar at 4:07 AM
Posted by sait phay yar at 11:26 PM
Posted by sait phay yar at 9:32 PM
Posted by sait phay yar at 5:39 PM
Posted by sait phay yar at 11:08 PM
Posted by sait phay yar at 5:43 PM
ငြမ်း နှုတ်ခမ်းပါးပါးမှ နာမည်လေးတစ်ခုကိုတိုးတိုးလေးရေရွတ်နေသည်။
မိုးကောင်ကင်တစ်ခုလုံးမှုံမိုင်းနေသည်။ ဒီရာသီလေးက မိုးရာသီကနေ ဆောင်းကိုကူးနေသည့်ရာသီလေးပါ။ ကန်ရေပြင်ကိုဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသည့်လေပြေလေး က မျက်နှာကိုဝေ့အသွားမှာ လန်းဆန်းမူတစ်ခု ကိုခံစားရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှုံမှိုင်းနေသလို တိတ်ဆိပ်နေသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တိတ်ဆိပ်နေမူကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ကမ်းစပ်ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်နေသော ရေလှိုင်းလေးများအသံမှာ ကျယ်လောင်စွာမင်းမူနေကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုရေလှိုင်းသံကလွဲလို့ မည်သည့်အသံမှ မပီပြင်။မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးမှာစိမ်းစိုနေသောတောအုပ် ၊လှိုင်းဂယက်များနှင့်ရေပြင်၊ စိတ်တစ်ခုလုံးကိုဒီမြင်ကွင်းက အုတ်စိုးစေသည်။ လောကအလှတွေလွမ်းမိုးနေပေမဲ့ စွဲလမ်းနေတဲ့အာရုံတစ်ခုကသံပါတ်ပေးထားတဲ့စက်ရုပ်တစ်ခုလို…….
ငြမ်း နှုတ်ခမ်းပါးပါးမှ နာမည်တစ်ခုကို ရေရွတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
ညကတော့လေပြင်းကျခဲ့သည့်အတွက် ရေကန်က ခါတိုင်းလိုမကြည်လင် သစ်ရွက်ခြောက် စို အဆင့်အတန်းမခွဲဘဲ ရေလှိုင်းကြက်ခွပ်တွေကြားမှာ လူးကာလှုပ်ကာ ရှေ့တိုးလာသလိုတစ်ဖုံ နောက်ဆုတ်သွားသလိုတစ်မျိုး ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ခါတိုင်းနှင့်မတူ အလှတစ်ခုကိုဖန်တီးနေသလို စိတ်အစဉ်ကိုလည်း ကလူနေသလိုပင်။ ရေကြည်မှာငါးများကူးခတ်တာပီပြင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီလိုရေနောက်မှာ သူတို့လေးတွေဘယ်ပျောက်နေသည်မသိ။ရှာဖွေတာမဟုတ်ပေမဲ့ မျက်စေ့တစ်ဆုံးလိုက်ကြည့်နေမိသည်။ အတွေးထဲမှာတော့ ရှာဖွေနေမိရင်း ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကောဆိုတဲ့.. ဒီလိုအ တွေးလေးဝင်လာရင်း.....
ငြမ်း နှုတ်ခမ်းပါးက နာမည်လေးတစ်ခုကိုရေရွတ်မိလိုက်ပြန်သည်။
သဘာဝအလှတွေကိုဘဲ ကြည့်တတ်လွမ်းနေတာလား နှလုံးသားနုနုကဘဲ စွဲလမ်းတတ်လွမ်းတာလားတော့မသိ။ ဒီနေရာလေးနဲ့ဒီအလှကတော့ ဆွဲဆောင်လှသည်။ တစ်ခါတစ်လေ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးသလိုခပ်နွေးနွေးလေး ဖြစ်လိုက်၊ လွမ်းစိတ်ဓါတ်ခံရှိသူမို့လားမသိ ရင်မှာ ခပ်နွမ်းနွမ်းလေး နဲ့ ကျင်ခနဲဖြစ်ကာခံစားမိရပြန်သည်။ ရာသီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပေမဲ့အချိန်တန်တော့လည်း တစ်ပါတ်ပြန်ပြန်လည်လာတဲ့ဒီရာသီကတော့ အပြင်ပန်းလေးမှာအေးမြလို့လမ်းဆန်းနေပေမဲ့ ပုံသေနည်းတူလူသားတွေကြောင့်လားမသိ ရင်ထဲမှာတော့ နွေးထွေးမူကိုပြန်မရနိုင်တော့ဘဲ နာကျင်နေဆဲ။ ဥပေက္ခာတရားကိုလက်ကိုင်ထားတတ်နေသော်ငြားလည်း ဒီရာသီဥတုအခြေအနေက ပြန်လည် မလမ်းနိုင်တော့တဲ့နှလုံးက ဒဏ်ရာကိုကျက်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ပေ။ ဒါပေမဲ့လည်း စွဲလမ်းတတ်လွမ်းတဲ့သူ ငြမ်းတစ်ယောက် အတွက်ကတော့ဆောက်တည်ရာမရ အနွမ်းပန်းကိုလက်မှာကိုင်ဆောင်ရင်း........
ငြမ်း နှုတ်ခမ်းပါးနှစ်ခုလေး တွန့်လူးကာနာမည်တစ်ခုကိုရေရွတ်လိုက်ပြန်ပါသည်။
မည်၍မည်မျှကြာမည်မသိ။ နောက်ထပ်တစ်ဖန်ဒီရာသီတွေက ရက်စက်နေဦးမည်ပင်လား။
Posted by sait phay yar at 7:25 PM
Posted by sait phay yar at 5:30 AM
ကိုအောင်ရေးခိုင်းလို့ရေးလိုက်ပါဦးမယ်လေ။ မရေး၇င် လွယ်ဘူး ...
ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ကမ္ဘာကုန်မဲ့နေဟာ ဒီလောကမှာနေရတဲ့နောက်ဆုံးနေ့လေးပါဘဲ။ တောင်ဘက်မှာမိုးညိုရင်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် စိတ်က လေးနေတာတို့ဘာတို့ဖြစ်တတ်သေးတာဘဲ ကိုယ့်ရဲ့လောကမှာနောက်ဆုံးနေရမဲ့နေ့ကိုလည်း လူတွေရဲ့စိတ်မှာတစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းတော့သိနေကြလိမ့်လို့ထင်မိတယ်။ ကိုယ့်ထက်အရင်သေးဆုံးသွားသူတွေပြောမသွားခဲ့ကြပေမဲ့ သေဆုံးသွားပီးတော့မှ သူသေတော့မှာမို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာနေမှာ သူနောက်ဆုံးစကားက ကြည့်ပါဦး။ စသဖြင့်တော့၇ှိကြတယ်။ကမ္ဘာကုန်တော့မယ် ဆိုရင်လည်း တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း လူတွေခံစားသိကြမှာဘဲလို့ယုံကြည်မိတယ်။ ထားပါတော့လေ... သူရေးခိုင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းရေးရဦးမယ်။
အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့လူတွေတစ်ယောက်မှ ကိုအနားမှာမရှိစေချင်တာ။ သူတို့တစ်တွေခံစားနေရတာကိုမကြည့်ချင်လို့။ ဒါပေမဲ့ အနားမှာ ရှိနေစေချင်ဆုံးလူတစ်ယောက်ကတော့ အမေဘဲ။ အမေ့ရင်ခွင်မှာနားခိုရင်း အမေမေတ္တာဆိုပေးနေသံလေးကိုကြားပီးစိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းမူ ငြိမ်းချမ်းမူတစ်ခုကိုတော့ နောက်ဆုံးခံယူသွားချင်တယ်။
ငါ ဆိုတဲ့ မာနာတစ်ခုကိုတော့ခြွေချခဲ့ရမှာပါလားဆိုတာကိုက တော်တော်လေး နှမြောမိတယ်။ ကိုယ်ဖန်တီးချင်တဲ့အိမ်မက်တွေ ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပီးလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေ အဲဒါတွေအကုန်ပျက်စီးမည့်အရေးကိုကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းမိမယ်။ ကိုယ်က မာနကြီးတဲ့လူဆိုတော့ အဲဒီခံစားချက်ကပိုများနေမယ်။
တစ်ကယ်တမ်းတော့ ထွေထွေထူးထူးပြင်ဆင်မိမှာမဟုတ်ဘူး ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မူက အပြည့်ရှိနေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လေ။ မနက်ဖြန်လိုစာမေးပွဲရှိမှ စာထိုင်ကျက်နေတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့နေ့စဉ်တာဝန်တွေကို သေချာလုပ်ကိုင်တယ်။ အေးဆေးဘဲနေ့စဉ်တွေကိုကျော်ဖြတ်တတ်နေပြီ။
၀မ်းနည်းမိမှာကတော့ ပျော်ရွင်ခဲ့တဲ့ကြည်နူးခဲ့တဲ့ အချိန်လေးတွေကိုနှမြောမိနေမှာပါ။ ဘယ်သူနဲ့လည်းဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ကိုတစ်ကယ် ဖြူစင်ရိုးသားစွာချစ်ကြတဲ့ မိသားစုလေးရယ် ကိုယ့်လိုအပ်ချက် ကိုယ့်ပျော်ရွင်မူကို အမြဲဂရုစိုက်ပေးတဲ့ ချစ်သူမိတ်ဆွေနဲ့ခွဲရမှာကိုတော့ဝမ်းနည်းမိမယ်။ နောက်ပီး လူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကို ၀မ်းနည်းစွားထိုင်ကြည့်နေရမှာကိုမလိုလားဘူး။
ကြောက်နေမိမှာကတော့ တိုက်တွေပြိုကျတာတွေ မြေကြီးတွေကျွံကျတာတွေ လူတွေအော်သံတွေ မြင်ရမှာကိုတော့ မခံစားချင်ဘူး။
ကိုယ့်လက်ထဲမှာ စိတ်ပုတီးတစ်ခုကိုတော့ဆောင်ထားမိမယ်။ မယ်တော့်ကိုချစ်တော့ ဘယ်သွားသွားဘယ်နေရာမှာဘဲ ရှိရှိ ဆောင်ထားတတ်တော့ နောက်ဆုံးအချိန်လေးအထိလည်း ဆောင်ထားချင်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာတော့ရေးထားရင်လည်းအပိုဘဲဆိုတော့ တစ်ကယ်လို့ရေးခွင့်ရခဲ့ရင်တောင် ရင်ထဲမှာ တစ်သက်လုံးသိမ်းထားတဲ့စာကြောင်းလေး၊ နောက် ပီး ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ကိုယ့်ကိုခွန်အားတွေပေးနေခဲ့တဲ့ စာတကြောင်းလေးကိုတော့ရေးချမိမယ်ထင်တယ်။ (Fear not I am with you always ) ဆိုတဲ့စာလေးပါ။
သေခဲ့ရင် တောင် ငါတစ်ယောက်ထဲမိုးကောင်းကင်တော့မသွားဘူး လူတွေအားလုံးနဲ့တူတူ ဘုရားသခင်အရိပ်မှာ ပျော်ရွင်စွာဆုံတွေ့ချင်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့တွေးနေမယ်။
ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်တဲ့ မိဘမောင်နှမရယ် ချစ်သူရယ် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့တယ်။ဆိုတာကိုတော့ ဂုဏ်ယူချင်တယ်။
လောကမှာနေတုန်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇုးတော်တွေ မနဲဘူး ဆိုတာတွေကိုစဉ်းစားနေမိမှာပါ။ (Counting the Graces and Blessings )
( Nearer My God To Thee) သီချင်းကိုကျူးရင့်ရင်း နောက်ဆုံးအချိန်ကိုကုန်လွန်ချင်တယ်။ အဲလိုအချိန်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ သီဆိုနေချင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ လူတွေအားလုံးပါ ၀ိုင်းဝန်းသီဆိုစေချင်တယ်။
Posted by sait phay yar at 6:52 PM
Posted by sait phay yar at 7:36 PM
Labels: မဲခေါင် ခရီးစဉ်
ကင်မရာက သိပ်မကောင်းတော့ သိပ်တော့မလှဘူး ဒါပေမဲ့ ဒီအရောင်နဲ့ဆည်းဆာပုံလေးတွေကို နှစ်သက်လို့တင်လိုက်တာ။
Posted by sait phay yar at 6:01 PM
ကောင်းကင်က တိမ်ရိပ်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာကို ကြည့်ရတာကို တစ်မျိုးပျော်စရာပါဘဲ
Posted by sait phay yar at 5:18 AM
ကိုယ့် အတွက်တော့ မမျှောနိုင်ဘူးလေ
အဲဒီအလွမ်းလေးကို ကျမ စွဲမက်နေတယ်။
အခုလို အချိန်မှာ ဒီရနံ့ က ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေပြန်တယ်။
ကန်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာကူးခပ်နေတဲ့ ငါးတွေ လိပ်တွေ ကိုကြည့်ရင်း အားကျနေမိတယ်။
အခုလိုဝေးသွားတော့မှ သူ သာအနားမှာ ရှိပေးရင၊်
ရင်ကိုငြိမ်းလေမလား လို့ သက်ပြင်းတွေအခါခါချနေမိတယ်။
သိနေမိတယ် သူဘယ်တော့မှ ကိုယ့်အနားက
လွမ်းနေမိတယ်။ အရင်ကလို ပျော်ရွင်ဖွယ် အချိန်တွေကိုသတိရနေမိတယ်။
လူတွေက ပြောကြတယ် ကိုယ့်ကို ကိုယ် ဒုက္ခပေးရတာလည်းတဲ့လေ။
ဒါပေမဲ့ ခေါင်းမာတယ်ပြောပြော ညာတတ်သူ သူ့ကိုမှ ချစ်ခဲ့မိတာကိုး.....
သူပျော်ရွင်တဲ့ သူတစ်ဦးထံမှာ ပျော်ရွင်နေတာကိုဘဲ
Posted by sait phay yar at 9:25 PM
Posted by sait phay yar at 5:29 PM
ကျော်ဖြတ်ရတာ ရက်လနှစ်ပါ မေ။
ရွှေကိုလည်း အမေမ မက်
ပြန်ဆုံမဲ့နေ့ထိ စောင့်နေပေးပါ မေ။
Posted by sait phay yar at 6:16 AM
Posted by sait phay yar at 5:55 AM
၀က်နံရိုးဟင်းလေးပါ။ ချို ချင် စပ် အရသာလေးနဲ့ တော်တော်လေးစားကောင်းတယ်။
Posted by sait phay yar at 6:34 PM
တော်တော်လေးစားကောင်းတဲ့ အကောင်ကြီးပါ။ တော်တော်လေးလည်း နှုးညံ့ပါတယ်။
Posted by sait phay yar at 9:10 PM
မင်းအပြုံးကိုမှန်းဆကြည့်ရင်း နာကျင်စေတဲ့ဆူး ငါမနှုတ်ရက်ပေ
Posted by sait phay yar at 6:00 PM
အတွင်းကဒဏ်ရာ မည်သို့ ဖြေမည်ငါမသိ။
Posted by sait phay yar at 9:45 PM
ဤနေရာလေးက ဆွဲဆောင်မူရှိတာလား ရင်ထဲကရှိနေတဲ့ နေရာဟောင်းလေးလားဆိုတာကိုတော့ မဝေခွဲတတ်ခဲ့။ အိမ်မပြန်ချင်ပေမဲ့အချိန်တန်ရင်တော့ အိမ်ပြန်ရမှာပါဘဲ။ ဒီထိုင်ခုံနေရာလေးမှာ ထိုင်ချင်တဲ့ဆန္ဒ ရင်မှာအ ပြည့်၊ ဘယ်တော့ဘဲ ထိုင်ရထိုင်ရ မ၇ိုးသွားဘူး။ ဒီနေရာလေးမှာ တူတူထိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတယ်။
နွေလည်ခေါင်ပူလောင်လို့ ချွေးတွေစို့နေတဲ့ နှဖူးကချွေးကို သုတ်သင်ပေးရတာကို အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့ အချစ်တွေပိုဝေစေသလိုပါဘဲ။ ကျေနပ်စွာတာဝန်တွေယူခဲ့မိတယ်လေ။ အပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက် တစ်ခဏချင်း ချွေးတွေသီးသီးနေတတ်တာကို ကြည့်ကာရီမိခဲ့တယ်။
အင်းလေ..... အချိန်တွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း မပြောင်းလည်းတဲ့ ကိုယ်ဘက် ကတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါပုံမှန်တော့ ဒီနေရာလေးကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ ကန်ရေပြင်ကတိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြေလေးကို အငမ်းမရ ရှုရှိုက်ရင်း ပူလောင်နေမူကို နှစ်ယောက်သား ဖြေဖျောက်တတ်ကြသေးတယ်။ ကိုယ်က ကျေကျေနပ်နပ်ပြောတတ်သေးတယ်။ အညာမြေမှာ ကြားလေ လိုက်ရှာတတ်မူ ကိုလေ။ ပူလောင်တဲ့ အညာမြေမှာ ကြားလေက တော့ တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလည်းဆိုတာကိုပါ။ နောင်တစ်ချိန် ဒို့တတွေလည်း အညာမြေက ကြားလေကို တူတူသွားခံယူမယ်ပေါ့။ အတွေးလေးတွေကိုယ်စီ ဝေငှခဲ့ရင်းပျော်ရွင်ခဲ့ဘူးတယ်။ နောင်တစ်ချိန်ဆိုတာကိုက အတွေးတွေကို ပို ပျော်ရွင်စေခဲ့တယ်။ ဒို့တတွေပညာစုံတဲ့တစ်နေ့ အလုပ်အကိုင်တွေကိုယ်စီနဲ့။ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဒို့မြတ်နိုးတဲ့အညာမြေကိုပြန်မယ်။ အသက်တွေရလာချိန်ပေါ့လေ မန်ကျီးရိပ်ကခုံတန်းမှာထိုင်ရင်း ရေနွေးကြမ်း နဲ့ လ္ဘက်ရိုးကိုဝါးကာ သားတွေမြေးတွေနဲ့တူတူ ပျော်ရွင်စွာနေထိုင်ကြမယ်လို့ ရည်၇ွယ်တိုင်ပင်ခဲ့ကြဘူးတယ်လေ။
အတိတ်ဆိုတာ ကိုချန်ထားခဲ့ချင်ပေမဲ့ စွဲလမ်းတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်တွက်ကတော့ အတိတ်က အနာဂတ်ရဲ့အရိပ်မဲလေးတစ်ခုအလားကပ်ပါနေခဲ့ပီ။
ကန်ရေပြင်က လေအေးအေးလေးတွေတိုက်ခတ်လာတယ်။ မျက်နှာပေါ်ကချွေးလေးတွေကိုခြောက်သွေးဖို့သူတို့ကြိုးစားပေးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ကြွေကျလာတဲ့ မျက်ရည်တစ်စကိုတော့ မခြောက်စေနိုင်ပါဘူးလေ။
ရှေ့တည့်တည့်က သစ်ပင်ပေါ်မှာ ပုရွက်ဆိတ် အမဲတွေလမ်းကြောင်းတွေခွဲပြီး အစာတွေသယ်နေကြတယ်။
ဒါဆို မကြာခင်မိုးရွာတော့မယ်။ သဘာဝအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်း ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ညာတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက် သစ္စာမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်မှန်း အစက မသိခဲ့တာကိုက ကိုယ်ညံ့တာပေ့ါလေ။
ဟုတ်တယ် ညာတတ်တာကို က သူ့ပညာလေနော်။ အင်းလေ အကြွေးတွေကျေအောင် ဆပ်လိုက်ရတယ်သဘောလေးကိုဘဲနားလည်လက်ခံလိုက်တော့မယ်။
အတွေးတွေကိုသတ်ရင်းခြေလှမ်းကို နောက်ပြန်လှည့်လိုက်ရင်း အခုလည်း နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုများ ဆက်ညာနေဦးမယ်မသိဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အကြွေးတွေလိုက်တောင်းနေတာ နေမှာပါလေဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အိမ်အပြန်ကိုခြေလှမ်းတွေပြင်လိုက်ပါတော့တယ်။
ခြေဖ၀ါးအောက်က သစ်ရွက်တွေရဲ့ တစ်ခြောက်ခြောက်မြည်နေသံကလွဲလို့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိပ်နေပါတော့တယ်။
Posted by sait phay yar at 4:49 AM
အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရ နေ့လေးပါ
Posted by sait phay yar at 5:16 AM
Posted by sait phay yar at 7:46 PM
ဒီနေ့မိုးတွေရွာနေတယ်။ နှင်းကတော့ မကျတော့ပါဘူးလေ။ နှင်းကိုချစ်ခဲ့ပေမဲ့ နှင်းနဲ့ဝေးရာမှာပါ။ မိုးရည်တစ်စက်ပီးတစ်စက် ခေါင်းပေါ်ကျလာတယ်။ နေရာမပြောင်းပါဘူး ဆက်ထိုင်နေမိတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ အတွေးတွေရပ်လို့မရဘူး။ နှင်းကိုမျှော်နေတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် မိုးစက်လေးတွေကြားမှာ မမှိတ်မသုန် ငြိမ်သက်စွာ မိုးစက်လေးတွေကို နှင်းမှုန်အလားခံစားကြည့်မိနေတယ်။
မိုးတွေချိန်းနေတယ်။ မကြာခင်မှာ သဲကြီးမဲကြီးရွာတော့မယ်ဆိုတာကိုချိန်းခြောက်နေတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းအောင်သိမ့်သိမ့်ခါအောင် အော်ဟစ်ပြနေလိုက်တာ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ဒေဝေါဆိုကာခြောက်လှန့်ခံခဲ့၇တော့ အခုလည်းမိုးချိန်းရင် မသိစိတ်က လန့််နေတုန်း။ ဒါပေမဲ့အခုတော့ ကြောက်စိတ်ထက်ရင်ထဲကနာကျင်မူဒဏ်ရာ ကမကျက်သေးသလို အတိတ်ကိုမှန်းဆနေမိတော့ အော်ဟစ်နေတဲ့ ဒေဝေါ မတိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုအပြင်းအထန်ချလိုက်ရင်း ပြန်မှ ဖြစ်မည်။ မပြန်လို့မဖြစ်တော့ ကျန်းမာရေးက ကောင်းရှာသူဆိုတော့ အိမ်အမြန်ပြန်မှဖြစ်မည်။ အိမ်မရောက်ခဲ့ရင်လည်း နေရာတစ်နေရာမှာဝင်ခိုမှပင်။ မဲမှောင်နေတဲ့ကောင်းကင်ကိုအသာလေးကြည့်လိုက်ပြီး မိုးရယ်... ဆိုက ထိုင်ရာမှထ ထိုင်လိုက်မိသည်။
ထိုင်ရာမှအထ နောက်လှည့်အကြည့်မှာဘဲ လူတစ်ယောက် ထီးလေးအနောက်ကနေ ဆောင်းပေးထားလိုက်သည်ကိုခုမှသတိထားမိလိုက်ရသည်။
“လာကိုယ့်ထီးအောက်ကိုလာ။ မင်းကိုစောင့်နေတာ မင်းကို အိမ်အထိလိုက်ပို့မယ်နော်။ မိုးတွေကျလာကတည်းက ကိုယ်မင်းနောက်က အမှီလိုက်လာတာ။မင်းလေးနေမကောင်းဖြစ်မှာဆိုးလို့ ကိုယ် ထီးအမြန်ယူပီးလိုက်လာတာ စိတ်ပူလိုက်ရတာကွာ။
မင်းကလည်းပျောက်သွားတာ လိုက်လို့တောင်မမှီဘူး။ ”
ခရားရေလွှတ်အဆက်မပြတ်ပြောနေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ရင်း သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို ခိုးချလိုက်ရင်း ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး
“မင်းရဲ့ မနက်ဖြန်တွေတိုင်းမှာကိုယ်အမြဲရှိနေပါ့မယ်လေ။ မင်းရဲ့အတိတ်တွေကိုဖျောက်လိုက်ပါလို့မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းလက်ခံလာမဲ့နေ့ကိုစောင့်နေမယ်နော်။ မင်းရဲ့လိုအပ်နေမူတွေကို လိုက်ဖြည့်ပေးခွင့်လေးကိုဘဲကျေနပ်နေပါပီလေ။”
မိုးတွေအရမ်းသဲလာတော့ ထီးလေးတစ်ချောင်းအောက်မှာ ပိုမိုနီးစပ်သွားကြသည်လေ။
အပြန်လမ်းမှာ ရေတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်းများလာသည်။ လမ်းလျှောက်ရတာလည်း တစ်ဗွမ်းဗွမ်းပေါ့။ သူကတော့ ကိုယ်စိုမှာကိုစိုးရိမ်တော့ ကိုယ့်အပေါ်မှာဘဲထီးက၊ သူ့ကတော့ တော်တော်လေးစိုနေပီလေ။ ဂရုစိုက်မူလေးကို တော့ကျေနပ်မိသည်။ သူ့ဂရုစိုက်မူတွေကတော့ ကိုယ့်အတွက်အမိုးတစ်ခုလို အမြဲတမ်းပင်။နှစ်ယောက်သားတိတ်စိတ်သွားကြသည်ပင်။ အတွေးကိုယ်စီနှင့် ခြေထောက်အောက်ကရေများကိုစောကစားရင်းနဲ့....
နောက်တော့ တိတ်စိတ်စွာပါလာတဲ့သူ့ကို ထီးက ကျလာတဲ့ရေလေးတွေကိုခံလိုက်ရင်းပက်လိုက်သည်။ သူကလည်း အံ့သြကာ ကြည့်ရင်း သူကလည်းပြန်ပက် ကိုယ်ကပြန်ပက်နဲ့ ရီသံတွေပျံ့လွင့်လာသည်။ ကိုယ့်ရဲ့ပါးချိုင့်တွေပေါ်အောင်ရည်နေသည်ကိုကြည့်ရင်း ...
“ မင်းကိုတစ်သက်လုံးပျော်စေချင်တယ်။ ”
ပျော်ရွင်မူတွေပေးတဲ့ မိုးကိုမေ့နေမိပီး မမြင်နိုင်တဲ့ နှင်းကို တမ်းတနေမိတဲ့အချိန်တွေကို နှမြောမိသည်။ မိုးရေတွေနဲ့စော့ကစားတတ်ခဲ့ပီ။ မိုးရေတွေက ပျော်ရွင်မူတွေပေးနေပီဆိုတာသိလိုက်ရသည်။ တစ်ခဏအတွင်းမှာဘဲ အတွေးအာရုံဏ်ထဲက နှင်းမှုန်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီ။ ပျော်ရွင်မူတွေပေးတဲ့မိုးစက်ကလေးတွေကို အမိအရဖမ်းဆုတ်လိုက်ရင်း သူ့မျက်နှာကိုပက်လိုက်ပါတော့သည်။
ဒီအပျော် ဒီအပြုံးကတော့ သူ့ဘ၀မှာပထမဦးဆုံးသူမြင်လိုက်ရခြင်းပင်လေ။
Posted by sait phay yar at 5:55 PM
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှုန်မှိုင်းနေသည်။ မှုန်မှိုင်းနေမူကိုထပ်မံမွန်းမံလိုက်သလို။ ပျော်ရွင်မူအတိတ် ပုံရိပ်တွေကို ဖုန်းကွယ်ပေးနေသလား မျက်ဝန်းမှာလည်း ရီဝေစေတဲ့ မျက်ရည် စတွေ။
ဆေးလိပ်ငွေ့တွေ တစ်မျည်ခြင်းမှုတ်ထုတ်နေသော သူ့မျက်နှာကို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ သူစိတ်တွေရှုပ်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ သူ တွေဝေနေတယ်ဆိုတာလည်းသိလိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ် သူတွေဝေသင့်တယ်။ သူ့ကိုအပြစ်မဆိုချင်ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုမှတော့ နောက်ဆုတ်လမ်းခွဲကြရုံပေါ့။ အခြေအနေကွာ ခြားနေမူကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်မှမခံနိုင်တာလေ။
အခုဘဲကြည့် ချစ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ သူနှုတ်ခမ်းက အခုတော့ မတူညီမှုတွေက နေ အဲဒီအချစ်တွေကိုဖုံးတော့မယ်။ ဟုတ်တော့လည်း အဟုတ်သားပါ။ သူက အအေး ကြိုက်တယ် ကိုယ်က အပူကြိုက်တယ်။ စားရင်လည်း ပူပူလေးစားချင်။ ကော်ဖီသောက်တာတောင် သူက အေးနေတာကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ ပူနေတာကို မှုတ်ရင်း အားရပါးရသောက်ချင်တတ်သူ။ အရောင်တွေရွေးရင်လည်း စိတ်ကူးတွေတစ်ခြားဆီ။ အနေအထိုင်မှာလည်း မတူညီက မတူတာမှ တော်တော်ကိုမတူကြတာပါ။
အခုတော့လည်း ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ အပြုအမူတွေ ခံစားချက်တွေကို မတူညီမူတွေက ဖုံးလိုက်ပီ။
သူ့ဘက်က လမ်းခွဲစကားပြောလာပီ။ စိတ်ထဲမှာတော့ တော်တော်လေး နာမိသည်။ ခံလည်းခံစားရသည်။ စိတ်တော့မကောင်းလှပါ။
အင်းလေ ... လမ်းခွဲကြပီဆိုမှတော့ လမ်းသစ်တစ်ခုကိုတော့ ထွင်ကြရမှာဘဲလေ။ အချစ်ဆိုတာနားလည်တတ်ခြင်းတွေရှိမှလေ။ သူ့မှ ကိုယ့်ကို လက်မခံ ပေးနိုင်တော့တာ၊ ပြောရရင်တော့ သူ့၇င်ထဲမှာ အချစ်ဆိုတာမရှိတော့လေခြင်းပါဘ။အဲဒါကိုလည်း သိပ်မကြာခင်သောရက်ပိုင်းမှာမှ သိလိုက်ရတယ်။
လမ်းခွဲပီး သိပ်မကြာပါဘူး၊ ရက်ကနေ လတောင်မကူးလိုက်သေးခင်မှာပါဘဲ သူ့ဆီကသတင်းတစ်ခုကြားရတယ်။ သူအိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပီတဲ့။ သူ့ကိုဘယ်တော့မှ မဆက်သွယ်ပါနဲ့တော့တဲ့လေ။ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း မခြွင်းပါဘူး သူအိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုတာကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေနပ်သလိုမျိုး ကိုယ်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူတစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူ နဲ့ သူလက်ခံပျော်ရွင်နိုင်ပါစေသားလို့ပါဘဲ။
သူကိုယ်နဲ့နေလို့စိတ်ညစ်နေမဲ့အစား သူပျော်ရာနေရာမှာ နေ နေတာကိုကြည့်နေရ ရင်ကိုဘဲကျေနပ်ရမှာပါ။ သူဒီလိုလမ်းခွဲစကားပြောနေခြင်းကလည်း သူ့မှာရည်၇ွယ်ထားသူ နောက်တစ်ယောက်ရှိနေခဲ့လို့ သာပါလားလို့လည်း တွေးလိုက်မိတယ်။
အသေအချာပြန်တွေးကြည့်တော့ ကိုယ်တို့တစ်တွေလမ်းခွဲခဲ့ရခြင်းက ကွာခြားနေမူတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ အမှန်တစ်ကယ်တော့ နားလည်မူတစ်ခုနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လက်ခံတတ်မူပါဘဲ။ ကိုယ့်ကိုသူ ချစ်တာတော့ ချစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အချစ်ကို အပ်ဒေ့တ် လုပ်ဖို့လိုအပ်နေမူပင်။ ဘယ်ဟာက ကိုယ့်အားနည်းချက်၊ ဘယ်အရာကိုတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတယ် စသဖြင့်အရင်ကတည်းက သာ ညှိခဲ့ရင် တော့ တစ်မျိုးတော့ ဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်တယ်။
အခုတော့လည်း နှစ်ယောက်သား ဝေးခဲ့ရတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
Posted by sait phay yar at 6:31 PM
(၁) စာတွေရယ် အလုပ်တွေရယ်
လိုချင်တာမ၇လို့ ဘုရားကိုတောင် အပြစ်တင်ခဲ့မိတယ်။ အခုတော့ သူက အကောင်းဆုံးတွေစီစဉ်ပေးခဲ့တာပါလားလို့..
တစ်ခုပြီးရင် တစ်ခုလာနေလို့ ကိုယ့်ဘေးနားက သည်းခံပေးနေသူကိုအားနာမိတယ်။
ကြွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။။ စာတွေတအားကြိုးစားနေလို့ စာအုပ်ထူထူတွေက ပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်။ ကျောင်းစာတွေ.... အဲဒီစာတွေဘဲ လောလောဆယ် ဖတ်နေရတယ်။
စိတ်ကတော့ (သူနဲ့)တူတူခရီးတစ်ခုထွက်နေပါတယ်။ ပန်းခြံထဲကထိုင်ခုံမှာ တူတူထိုင်တယ်။
စမ်းရေအေးအေးလေးရယ်။ နေ၀င်သွားတာလေးကိုကြည့်နေတယ်။ ပန်းခြံထဲက ပန်းမျိုးစုံရနံ့တွေကို အမည်နာမခွဲပီး ခံစားကြည့်နေတယ်။
(ဖြစ်ချင်နေတာ ...ပါ )
ကဗျာတွေ…. ကတော့ ရေးခြစ်မိပါသေးတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ သိမ်းထားသေးတယ်။
ဗဟုသုတတွေ ပုံပြင်တွေ။ လောကအတွေ့အကြုံတွေ၊ ဟာသတွေ။ ပျော်စရာ ကမ္ဘာလေး တည်ဆောက်ဖို့အိမ်မက်တွေ.......(ဘေးနားက နေ မမောတမ်းပြောပြနေတာကို မမောတမ်း နားထောင်တယ်)
ငါ ကြိုးမပါဘဲ တုပ်နှောင်ခံနေခဲ့ရတာ
( ကျေနပ်ခဲ့တာက သစ္စာရှိတဲ့ ခရေပန်းလေးတွေကိုသီကုံး ပန်ဆင်ခွင့်)
သူတစ်ပါးတွက် ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုနှမြောရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘဲသနားနေမိတယ်။
ခုံတန်းလျားလေး၊ လေပြေလေးစော့ကစားပေးတဲ့ ကန်ရေပြင်နားက သစ်ပင်လေး။
ပြတ်သားတဲ့ အတွေးအခေါ် ရှင်၊
အ တယ်လို့တော့မပြောလိုပါဘူး။ လယ်မလိုနဲ့တော်တော် အတဲ့လူပါ။
ဘောင်ခတ်ပြီး အတွေးခေါ်တွေကိုကျဉ်းမြောင်းပေးပီး အတ္တထူတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်း။
(ဘယ်တော့မှ မသွားပါ )
အောင်မြင်မူသရဖူကိုဆောင်းချိန် အမေ့ရဲ့ ပီတိပြုံးနဲ့ ပျော်ရွင်ဂုဏ်ယူနေမဲ့ မိသားစုမျက်နှာ၊
၀က်ဝံရုပ်ကြီး ( နာမည်ကိုပေးထားလိုက်တယ်လေ စိတ်ဖြေရာလို့ )
ဘာကြောင့်လည်း.... ဘာကြောင့် ငါ့ကျမှ ဒီလိုဖြစ်ရတယ်......??????????????? တွေနဲ့အတူ !@#%*^@^
Posted by sait phay yar at 10:48 PM
ခက်ခဲတဲ့ ဂျကာတာက ရပ်ကွက်တစ်ခု.. နောက်ဆူနာမီဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။
ဒီရေမှာအ၀တ်လျှော၊် ဒီရေမှာရေချိုး၊ ဒီရေနဲ့မျက်နှာသစ်၊ ဒီေ၇ထဲမှာဘဲ နောက်ဖေးသွား..
သောက်ရေကိုတော့ ရေစဉ်ပေါ်တင်ထားတယ်။ ဒါလည်း ခရစ်ယာန် အဖွဲအစည်းတစ်ခုက သောက်ရေပိုက်လုပ်ပေးထားတော့ ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကလူတွေသောက်ရေ ရနေကြတယ်။
Posted by sait phay yar at 6:13 PM
ပြုန်းတီးနေသော သစ်တောကြောင့် အင်ဒိုနီးရှား ကာလီမန်တန်လေဆိပ်မှထွက်လိုက်သည်ဆိုလျှင်ဘဲ ပူလွန်းတဲ့ကျောက်ငွေ့အပူကြီးကိုခံစားရသည်။
ခံစားရတာလည်းမပြောပါနှင့် သစ်ပင်ကြီးကြီးကိုတွေ့ချင်လျှင်သစ်တောနက်နက်ကိုရှာ၍ သွားကြည့်မှသာပင်။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင်လည်း သစ်ပင် ကြီးကြီး ကိုမတွေ့ရလှပေ။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမူမှာ ဤ သစ်တောပျက်သုန်းမူမှာ အဓိကပါဝင်နေသည်ဟု နားလည်သောသူများမှာ တော့ဤသစ်တောပြုန်းတီးမူကိုကြောက်ရွံ့လှပေမဲ့ လောဘသမားများမှာတော့ သစ်ပင် များကိုဆက်လက်ခုတ်ထွင်ကာေ၇ာင်းစားနေကြတုန်းပင်။
တောလူဟု ခေါ်သော အင်ဒိုးနီးရှားတို့အတွက် အလွန်တန်ဖိုးထားရသော အူရန်ဂူတန်များကို သတ်ဖြတ်နေသောသူများရှိနေသောကြောင့်မျိုးတုန်းစပြုနေသလို၊ သစ်တောကိုမှီတင်းနေကြရသော သူတို့မှာလည်းသစ်တောပြုန်းတီးသောအခါ နေစရာပျောက်ကြရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အူရန်ဂူတန်များ ပျောက်လုနီးပါးပင်ဖြစ်နေသာကြောင့် အဖွဲအစည်းတစ်ချို့မှ သူတို့ကို ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းဆောင့်ရှောက်မွေးမြူထားသည်။
ထရော်လီလိုရထားလေး ဖြစ်သည့်အတွက် အောက်ပြုတ်မကျအောင် အသေကိုင်ကာထားရသည်။ တောထဲရောက်ရန် ထရော်လီကို နာရီဝက်လောက်စီးရသည်။
မုတ်သုန်တောဖြစ်သည့်အတွက် သစ်တော အတွင်း သစ်ပင်များအောက်ခြေတွင် ဤအေ၇ာင်ရေများရှိသည်။ ဤရေများမှာ သစ်ပင်ခြေရင်းတွင်မရှိလျှင် သစ်ပင်များခြောက်သွားနိုင်သလို တောမီးများလည်းလောင်တတ်သည်။
အမြဲစိမ်းတောမှာတောလူသားဟုခေါ်သော အူရန်ဂူတန် အငယ်လေးတစ်ကောင်.......
အူရန်ဂူတန် တောလူသား များကိုမွေးထားရာကျောင်းအရောက်
သစ်တောထဲမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရေတခေါင်း ပင်....
Posted by sait phay yar at 7:29 AM
Posted by sait phay yar at 7:26 AM
သင်းပျံ့တဲ့ပန်းရနံ့လေးတွေကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ လေပြေလေးကိုရူရှိုက်မယ်။
နောက်........ တေးသီနေတဲ့ ငှက်ကလေးတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်မယ်။
ဒါပေမဲ့ဟာ .. ငါကတော့ သီချင်းမဆိုနိုင်တော့ဘူးလေ
Posted by sait phay yar at 7:06 AM
အာရုံတွေကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာကြာပီ။ လက်တွေကစာသားတွေချမေ၇းမိအောင် ချုပ်နှောင်ခဲ့တာကြာခဲ့ပီ။ အခုတော့မရတော့ဘူး။ ချုပ်တည်းသမျှ ဖြေလွှတ်ချလိုက်ပီ။ အတိုင်းထက်အလွန် ကြေကွဲတယ်။ အတိုင်းထက်အလွန် တမ်းတမိတယ်။ လွမ်းမိတာ ကမ်းကုန်တော့ တစ်ဖက်ကမ်းက အလွမ်းတွေကို မထိန်းနုိင်တော့ဘူးလေ။ မင်းကိုလွမ်းတိုင်း လာထိုင်တတ်တဲ့ဒီနေရာလေးကို နေ့တိုင်းရောက်ဖြစ်တယ်။
ကန်ရေပြင်ကတော့ တည်ငြိမ်နေဆဲပါ။ အေးချမ်းမူကိုဆောင်နေတယ်။ အပူအပင်မ၇ှိ တည်ငြိမ်လွမ်းလှပါတယ်လေ။မင်းတစ်ယောက်မသိပေမဲ့ ကန်ရေပြင်ကြီးကတော့ သနားစရာသတ္တ၀ါတစ်ကောင်ကိုကြည့်နေသလား ကြည့်နေလိုက်တာ။ ရှက်မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မ၇ှက်နိုင်တော့ပါဘူးလေ။ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ရှက်ခြင်းတရားကိုလည်းမေ့လျှော့စေတယ်။
သူ့လမ်းသူေ၇ွးချယ်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုဖြောင့်အောင်မကြောင်းနိုင်သေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ရင်ခွင်သစ်မှာပျော်၇ွင်နေမယ်ဆိုတာသိနေတော့ ပိုဝမ်းသာပါတယ်။
ချစ်သူပျော်၇ွင်တာကိုလိုချင်တာ အချစ်စစ်ပါ။ သူ့ဘက်ကသစ္စာမ၇ှိခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်ကသစ္စာမပျက်ခဲ့ဘူး
ချစ်နေဆဲပါ။ ပြန်မလာတာသိပေမဲ့ လာရာလမ်းလေးကိုငေးနေမိတာနေ့တိုင်းပါ။ စိတ်ကူးလေးထဲမှာ သူ့အပြုံးလေးတွေ သူ၇ီသံတွေ ၇င်ခွင်သစ်မှာကြည်နူးနေသံတွေကို ကြားေ၇ာင်မိတယ် မြင်ေ၇ာင်မိနေတယ်။
ပျော်ရွင်ပါစေချစ်သူ။ အဝေးတစ်နေရာကနေ ဆုတွေတောင်းပေးနေပါတယ်။ ပျော်ရွင်ပါစေချစ်သူ။
Posted by sait phay yar at 10:08 PM
Posted by sait phay yar at 8:08 AM
Posted by sait phay yar at 1:35 AM
!@#$%^&*()_ အချိန်!@#$%^&*()_+
Posted by sait phay yar at 12:13 AM
Posted by sait phay yar at 6:48 AM
ကန်ရေပြင် ကဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေအေးလေးက မျက်နှာကိုတစ်လှည့် ဆံနွယ်များကိုတစ်လှည့် ပက်ဖြန်းနေသလို။
တိတ်ဆိပ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အတွေးစတွေ လွတ်လပ်စွာသွားစေတယ်။
ဘာတွေကိုသေသေချာချာတွေးနေတယ်တော့မသိ ရောက်ခဲ့သမျှအတွေးတွေကတော့ အတိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေမှာပါ။
အဝေးတစ်နေရာတော့ကြည့်နေသည်။ မြင်သည်မမြင်သည်တော့မသိ အတွေးကမ္ဘာမှာတော့ အဝေးတစ်နေရာဆီ။
လေအဝှေ့နဲ့ကြွေကျလာသော ခရေပန်းလေး တစ်ပွင့်က ကျရောက်လာလေရဲ့။ ပန်းလေးကိုယုယုယယလေးကောက်ကိုင်လိုက်ရင်း သစ္စာတရားတွေကိုချယ်မှုန်းတတ်တဲ့ ပန်းကလေးကိုငေးကြည့်နေရင်း သစ္စာတွေဆက်လက်သီကုံးနေစေချင်လို့ အပင်မှာပြန်နေစေချင်စိတ် ပေါ်လာမိတယ်။
အပင်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်စေချင်စိတ်ပေါ်လာသည်။ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်တော့........သဘာဝတရားကိုတော့ ဆန့်ကျင်လို့တော့မရတော့ပေ။ အပင်ပေါ်မှာဝါးဝါးစွင့်စွင့်ဝေခဲ့တုန်းက ဝေခဲ့ပြီးပြီ အခုလည်းမြေကိုခ ရှာမည်။ သဘာဝတရားတွေလွန်ဆန်လို့မရ။
သူဟာဘယ်နေရာမှာနေရနေရ သူ့ရနံ့ကတော့ မပြောင်း အပင်ပေါ်မှာစံနေချိန်လည်း ဒီရနဲ့ မြေခတော့လည်း ဒီအနံ့ တစ်နေ့ခြောက်သွေ့သွား၇င်လည်း မပြောင်းလည်းတဲ့ သစ္စာတရားတွေနဲ့အတူသူ့ရနံ့က၇ှိနေဦးမည်။
တခါတစ်လေ ဒီသစ္စာရှိမူက သူ့ကိုလက်ခံသူနှင့်တွေ့ရင်တော့ တန်ဖိုးတစ်ခုပါဘဲ ဒီသစ္စာ၇ှိတတ်မူတစ်ခုကိုအသားကျနေသူကတော့ တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးပေါ့။
ခြေနဲ့လည်းနင်းရင်နင်းမယ်။ အမှိုက်တစ်ခုလို့လည်းသတ်မှတ်တာခံရင်ခံရမယ်။ တနေ့မှာ သူ့သစ္စာတွေကိုဖျက်စီးခံရတဲ့အခါလည်းခံရရှာမယ်။
Posted by sait phay yar at 9:59 PM
အရိပ်အောက် ကနေမျှော်ခဲ့ရတာ ပူပြင်းလွန်းလှပါရဲ့။
Posted by sait phay yar at 7:31 AM
တော်တော်လေးပြစ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘ၀စာမျက်နှာလေးကို မက်မက်စက်စက် ဖွင့်ကြည့်မိတယ်။ ပြစ်ထားတာကြာတော့ တော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲ ကိုအစဖေါ်၇တယ်။
ပြန်လည်တော့မဖွင့်ချင် ဖွင့်မိရင် နာကျင်မူတွေများနေတယ်။ အသစ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖွင့်ချင်တော့ အတော်စဉ်းစားပြီးဖွင့်လိုက်မိတယ်။
ဘ၀စာမျက်နှာတွေ တော်တော်များများလေးရေးထားခဲ့နေပြီဘဲ။ မေ့ထားတာကြာပါပြီ။ စာမျက်နှာတိုင်းတွေက ပျော်ရွင်မူတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာသိပ်မရှိ။ ပေးဆပ်လိုက်၇တာတွေ၊ မေ့လိုက်ရတာတွေ ကလားကာချ မေ့လိုက်ရတဲ့ နေ့ရက်တေ၊ွ ဘ၀အဆစ် ကလေးတွေတော်တော်များတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ မာနကင်းတယ်။ သူတပါးတွက် ပေးဆပ်မူတွေ အလျှော့ပေးလိုက်ရတာတွေ ။ ကိုယ့်အတွက် ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတစ်ရွက်မှ မတွေ့မိသေး။
စာမျက်နှာတွေ အတော်ကုန်လုပြီ အချိန်တွေကလည်းတော်တော်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီးကိုး။
အင်း...ဘ၀စာအုတ်လေးတောင်နွမ်းလို့ စာမျက်နှာတွေကုန်လုပါပေ့ါလား။ အတိတ်စာမျက်နှာတွေက အပျော်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပြုံးမိသလို ဒဏ်ရာလေးတွေပြည့်နေတဲ့နေ့ကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရလေးတွေစီကုံးထားမိတာကိုလည်း သေချာလေးကြည့်မိနေတယ်။
တစ်မျက်နှာခြင်း လှန်လာလိုက်တာ မှတ်တမ်းရဲ့နောက်ဆုံးတစ်နေရာကိုေ၇ာက်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးကတော့ သံသရာ ၀ဋ်ကြွေးစာမျက်နှာမှာဆုံးနေတယ်။
အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဖတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအကြွေးတွေ ကုန်လောက်ပြီလို့အောက်မေ့တယ်။ နောက် တော့ သက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုပြင်းပြင်းလေးချလိုက်ရင်း ဒီစာမျက်နှာမှာရပ်ထားတာတော်တော်ကြာပါပေါ့လား။ အခုတော့ စာမျက်နှာသစ်ကိုစချင်နေတယ်။ စာမျက်နှာသစ်ကိုစဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။
၀ဋ်ကြွေးတွေကုန်သင့်ပြီထင်တယ်။ ဒီဝဋ်ကြွေးတွေကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ဆေးကြောနေတာ ခံစားချက်တွေနဲ့ဆေးကြောနေခဲ့တာ မပြီးနိုင် ဒီစာမျက်နှာမှာတင်သောင်တင်နေတာကြာပေါ့။
ခေါင်းစဉ်အသစ်ကလေးတစ်ခုကိုတင်ဖို့ အားစိုက်ထုတ်ရင်း နဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ချတင်လိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ် အတ္တ စာမျက်နှာ။မျက်ရည်ကြားက ပြုံးလိုက်ရင်း စာမျက်နှာသစ်ကိုစလိုက်မိတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့အပြုံးတော့မဟုတ်တော့ နှုတ်ခမ်းကိုစေ့ပြီး နာကျင်မူတွေကြောင့် စတဲ့ အတ္တပြုံးလေးဘဲဖြစ်တော့မှာပါ။
Posted by sait phay yar at 6:06 AM
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူကိုပျော်ရွင်စေချင်တာလူတိုင်းဆန္ဒပါ။
ချစ်သူတိုင်းလည်းပျော်ရွင်ကြပါစေ..ချစ်သူတိုင်းလည်းဆုံဆည်းကြပါစေ လို့ တောင်းဆုပြုပါတယ်။
Posted by sait phay yar at 11:50 PM
Posted by sait phay yar at 5:35 PM
အမေပြောပြောနေတဲ့ဂေဟာကြီးပါလား အတော်လှတယ် အပြင်ကကြည့်လျှင်တော့ အိမ်က သိပ်တော့စိတ်မ၀င်စားလှ အိမ်ထဲဝင်ကြည့်တော့မှ ပန်းချီကားတေ၊ွ ပန်းပုရုပ်ထုတွေပြည့်နေသည်။ နံရံပေါ်မှာတော့ မိသားစုဓါတ်ပုံတွေ၊ ဘွဲအမျိုးမျိုးကိုယူ၍ ၇ိုက်ထားသော ကျက်သရေရှိ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပုံ။ အမေ ပြောပြောနေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းဆိုတာပင်ဖြစ်မည်။ တအိမ်လုံးမှာသန့်ရှင်းနေသည် အိမ်အပြင်အဆင်ကလှသည်။
ဧည့်ခန်းမရဲ့ တစ်နေရာမှာတော့ ဖိနပ်ဆင်နှစ်ခု စိတ်ဝင်စားသွားသည်။ အိမ်ကြီးမှာ အလွန်သန့်ရှင်းနေသည် တိတ်ဆိတ်နေသည်။ ကလေးတစ်ယောက်မှ ရှိပုံမရပေမဲ့ ကလေးဖိနပ်ကလေးတွေကိုတန်းစီနေအောင်ထားထားသော နေရာကိုစိတ်ဝင်စားမိသည်။ အမေပြောတော့ ဒီအန်တီက အပျိုကြီးတဲ့ အခုတော့ ကလေးဖိနပ်ကလေးတွေ အရွယ်စုံ ဆိုက်စုံတွေ ကလေးဖိနပ်တွေအကုန်လုံးက အသစ်တွေ တံဆိတ်တွေပင်မခွာထား ဘယ်လိုပါလိမ့်နော်။
လှေကားပေါ်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆင်းလာသည်။ ကျမကိုသေချုာလေးစိုက်ကြည့်ရင်း အမေ့ကိုပြောလိုက်သည်။
”အယ် စောရီး သဇင်ရယ် အိမ်က အမ ကဖုန်းဆက်လို့ လေ အဲဒါဖြေနေတာ။ သမီးလေးပါလာတာကို... အတော်ကြာကြာမျက်တောင်မခတ်ဘဲကျမကို ကြည့်နေရင်း။ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချတာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
“ ငြမ်းရယ် သမီးကို ငြမ်းလိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တယ် ။ သမီးက နောင်နှစ်တက္ကသိုလ်တက်တော့မယ်လေ။
“ငြမ်းတတ်နိုင်တာဆိုဘာမဆို သမီးလေးအတွက် လုပ်ပေးမှာပါ။”
“သဇင် နင်က ကံကောင်းပါတယ်။ ချစ်တဲ့သူနဲ့နေခဲ့ရတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူ့ကိုယ်ပွားသမီးလေးကိုချန်ပေးခဲ့တယ်လေ။
“ငြမ်းရာ အဲလိုတော့မပြောပါနဲ့ဟာ... သဇင်တစ်ကယ် ကိုမသိခဲ့တာပါ။
“ ငြမ်း တစ်ယောက်ထဲနေတော့မှာလားဟာ အိမ်ထောင်ပြုပါဦးဟ။
စိတ်ကိုမကောင်းဘူး အစွဲကြီးတဲ့နင့်ကို သဇင် အားမရဘူး။ မေ့သင့်တာမေ့ပေါ့ဟာ။”
“ထားပါလေ ဒေါ်နွဲ့ရှိတယ်လေ။ အဖော်ရှိပါတယ်။”
“အင်းပါလေ။ နင့်နဲ့ငါက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ နားလည်မူအပြည့်ပေးနိုင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါလေနော်။ ငြမ်းကို သဇင် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်။”
“အင်းပါ ထားလိုက်ပါတော့လေ အတိတ်က အရိပ်တွေ ပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပွားလေး ဒီသမီးလေးကို ပြုစုခွင့်ပေးတာကိုဘဲ ကျေနပ်ပါတယ်။ ငြမ်း သူ့အတွက် ဆက်ပေးဆပ်ချင်သေးတယ်။”
“အမေ သူ့အိမ်က ကလေးဖိနပ်တွေက ဘာတွေလည်းကလေးမရှိဘူးဆို။”
“အဲဒါလား ငြမ်းက အရမ်းသနားစရာကောင်းတယ်။ သူအရမ်းမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ေ၇းက ဖြစ်မလာဘူး။ နောက်တော့ အဲဒီလူက မိန်းမယူတယ် နောက် သမီးလေးမွေးတယ် အဲဒီသမီးလေးအသက်အလိုက် သူက ပစ္စည်းတွေလိုက်ဝယ်ပြီး သူသိမ်းထားတယ်။ အဲဒီကလေးလေး၇ှိရာနေရာတွေကိုသူလိုက်တယ် အဝေးကနေ လိုက်ကြည့်တယ်။ အခု သမီးအရွယ်ရောက်နေရောပေါ့။”
ဘာမှ ဆက်မပြောတတ်အောင်ပင်။ အဲလိုအစွဲကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ အံ့မခန်းပင်။ အခုလိုခေတ်မှာ အဲလိုအချစ်တွေရှာမရလောက်အောင်ရှားနေကြပါပြီလေ။
“သမီး ကို သူအရမ်းတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ခေါ်သွားတာ။
ဖတဆိုးသမီးလေးဆိုတဲ့ အမေ့စကားက မပြောဘဲသိနေတယ်။
မနှစ်ကဖေဖေဆုံးတယ်။ အမေတစ်ခါမှ မပြောဘူး အခုအဖေဆုံးပြီးခါမှ ဒီအန်တီ့အကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။
နောက် ဒီအန်တီအိမ်မှာ သွားနေပြီးကျောင်းတက်ရမယ်တဲ့။ နောက် သမီးကိုသူက သိပ်ချစ်တာတဲ့။
Posted by sait phay yar at 6:51 AM
တော်တော်လေးအသဲအသန် နေမကောင်းဖြစ်သွားလိုက်တာ တစ်ပါတ်လောက်အိပ်ယာမှာနေလိုက်ရတယ်။ အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် အစားပျက် စာလုပ်ပျက်။ ပျက်ပျက်ပျက်..ပေါ့...
အဲလို ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းကတော့ အလုပ်ပင်ပန်းတာကော၊ ကျောင်းစာကတစ်ဘက်၊ စိတ်ကိုအရမ်းထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်လေးတွေကြုံလိုက်ရတော့ မခံနိုင်အောင်ဘဲအရုပ် ကြိုးပြတ်ပါဘဲ။
တော်ပါသေးတယ် သတိရှိနေတုန်း နီးစပ်ရာမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေပြေးလာကူညီကြလို့သာ။ မဟုတ်ရင်တော့ မတွေးရဲစရာပင်။
အဲဒီလိုနေမကောင်းဖြစ်ချိန် လူတွေတော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးလိုက်သလိုခံစားရတယ်။ ကိုယ်တစ်ကယ်ခက်ခဲနေချိန် အားငယ်နေချိန်မှာ သူတို့တစ်တွေရဲ့ အချိန် ငွေ လုပ်အားတွေကို မညည်းမညူပေးခဲ့ကြတာတွေကိုက လေးစားမိပါတယ်။
နောက်ပြီး သူတို့တတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ကိုသိသိသာသာမြင်လိုက်ရတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးပြောရမလား တစ်ကမ္ဘာလုံးလို့ပြောရမလား ခင်သမျှမိတ်ဆွေ ဆွေမျိုးတွေ စိတ်တွေပူပေးကြတယ်။ အားလည်းပေးကြတယ် အကူအညီတွေပေးကြ။ မေ အရမ်း ကြည်နူးမိတယ်ပြောရမလားဘဲ။
နောက်ပြီး ကိုယ့်ငပေါဂေဟာကမောင်နှမတွေကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်မိတယ်။ တစ်ကဲ့မောင်နှမတွေလိုဘဲ စိတ်တွေပူပေးကြ ကူညီကြတာ နောက် ပျော်ရွင်စေချင်လို့ပန်းစီးတွေပို့... ပျော်ရွင်မိတယ်။ နေမကောင်းနေတဲ့ကြားက ပိတိဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ပေပေတေတေနေခဲ့မူရဲ့ အကြိုးကျေးဇူးတွေကို ပီပီပြင်ပြင်ခံလိုက်ရတယ်။
တစ်ယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ရင်း နေမကောင်းတုန်းက ကူညီခဲ့တဲ့ မိသားစ၊ု သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေကို ဒီနေရာကနေ အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ။
Posted by sait phay yar at 7:51 PM
Posted by sait phay yar at 11:47 PM
မေရဲ့ဥယာဉ်လေးမှာ ပင်ဖျက်ပိုးတွေဝေခဲ့တယ်။ ဥယာဉ်လေးတစ်ခုလုံး ပျက်စီးကုန်တယ်။
ဥယာဉ်တစ်ခုလုံးမှာဝေဆာနေတဲ့အပင်တွေ အကုန်သေကုန်တယ်။ အမြစ်တွေတူးကြည့်တော့ အမြစ်ကအစပုတ်ကုန်ပြီလေ။
ဘာကောင်းတော့မှာလည်း။ တစ်ခြံလုံးရှင်းရတော့တာ။ အမြစ်တွေကအစတူး မြေကြီးကိုလှန်ပြီးဆေးတွေဖြန်းလိုက်တယ်။
အလွန်မြတ်နိုးတဲ့ဥယာဉ်လေးကိုသော့ခတ် ကျောခိုင်းလိုက်ရင်း အားစိုက်ထုတ်ခဲ့သမျှ အချိန်၊ ငွေ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ခွန်အားတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ နှမြောမိတယ်။ နောက်တော့ ဒီဥယာဉ်ကိုမကြည့်ချင်လောက်အောင် စိတ်ပျက်သွားတယ်။
တေလေတစ်ယောက်လိုလျှောက်သွားနေရင်း မမျှော်လင့်ဘဲ အမြစ်ကောင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်ထားခံရရှာလို့သာ အညွန့်တွေမဝေနိုင်ရှာသေး အမြစ်ကိုကြည့်ရင်း မြေသြဇာပြည့်ပြည့် နေေ၇ာင်ကောင်းကောင်း သေချာလေးပြုစုပေးရင် အလွန်ကောင်းပြီး ဝေဆာနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ရတဲ့ အမြစ်ကလေးတစ်ခု။
နောက် သန့်ရှင်းသတ်ရပ်အောင် ဖန်တီးလိုက်တယ်။ ဘယ်အဖျက်ပိုးမှ မကျရောက်အောင် ဆေးဖြန်း။ အစဉ်သင့်ဖြစ်တဲ့အထိ ဖန်တီးလိုက်တယ်။ နောက် အဲဒီအမြစ်ကို ဥယာဉ်ရဲ့အလည်မှာ စိုက်ပျိုးလိုက်တယ်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အညွန့်လေးတစ်ခုစတင်ထွက်လာတယ်။ ပျောင်္်ရွင်မိတယ်။ စိုက်ပျိုးခွင့်ရ လိုက်ရလို့ အားရမိတယ်။
အညွန့်လေးတွေဆက်လက်ရှင်သန်အောင် ကိုယ့်ဘက်က ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးရမယ်။ တစ်ချိန်မှာ ဒီဥယာဉ်ကြီးမှာ ဝေဆာလာပြီး ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့အရိပ်အောက်မှာ ငှက်ကလေးတွေ လိပ်ပြာလေးတွေ။ လာရောက်နားခိုကြမယ်။ ပျော်ရွင်ကြမယ်။
မေ တစ်ယောက်လည်း ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့ အရိပ်အောင်မှာ နားခိုပြီး ဘ၀ရဲ့ အပူတွေ လောကရဲ့အပူတွေကနေ ခဏတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ထာဝရဘဲဖြစ်ဖြစ် နားခိုရင်း ဒီဥယာဉ်ကြီးထဲမှာ ပျော်ရွင်စွာနေထိုင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်။
ပင်ဖျက်ပိုး အမြစ်ပုတ်ပိုးတွေမကျအောင်တော့ အမြဲသတိရှိရတော့မယ်လေ။